MSI ၏ “Stop Struggling, Start Evolving” အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲ
Updated on (date) 8:20 နံနက် / 15-ဇွန်-2020
ပွဲကြာချိန်နှင့် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း။ ဇွန် ၁၆ ရက် – သြဂုတ် ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် (UTC+08:00 အထိ)၊ ပါဝင်မည့်သူများ ( “သင်”၊ “သင်၏”ဟု ရည်ညွှန်းမည်)သည် MSI ၏ “Stop Struggling, Start Evolving” အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲ ("ပွဲ") အတွက် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ ပါဝင်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်တို့ကို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်-
MSI ၏ အကျုံးဝင်သော ပစ္စည်းအသစ် နှစ် (2) မျိုးနှင့် အထက် နှစ်ခုတွဲ၊ သုံးခုတွဲ၊ လေးခုတွဲ အတွဲများကို(သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့် အတွဲများ စာရင်းကို ဤတွင်ကြည့်ပါ-https://steam-code-for-b550.msi-promotion.com/my/land-qualifying/?country_promotion=20000089 ပါဝင်သည့် MSI ၏ တွဲဘက် လုပ်ငန်းများထံမှ ဇွန်လ ၁၆ ရက်th ––မှဩဂုတ်လ အတွင်းဝယ်ယူရမည်။ ၃၁ ရက် ၂၀၂၀ခုနှစ်(UTC + 08:00)။ အကျုံးဝင်သည့် ပစ္စည်းများကို သီးခြား အစိတ်အပိုင်းများအနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ တည်ဆောက်ပြီးသား စနစ်အနေနှင့် ဖြစ်စေ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဇူလိုင် ၁ ရက် – စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း သင် ဝယ်ယူထားသည့် အကျုံးဝင်သည့် ပစ္စည်းများကို အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲ၏ စာမျက်နှာ https://steam-code-for-b550.msi-promotion.com/my/?country_promotion=20000089 တွင် ရှိသည့်) တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီး ထိုသို့လျှောက်ထားရန်အတွက် ဝယ်ယူထားကြောင်းသက်သေနှင့် ပစ္စည်း၏ ထုတ်လုပ်မှု နံပါတ်စဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါ။ စာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင် ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်၏ အမည်တံဆိပ်၊ ပြေစာ ရက်စွဲနှင့် ဆိုင်/ကိုယ်စားလှယ်၏ နာမည်များကို ဖော်ပြထားရမည်။ ပြေစာပါ ရက်စွဲသည် ဇွန်လ ၁၆ ရက် မှ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်း အားလုံးကို စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ် တွင် အပြီးလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျသည့် စာရင်းပေးသွင်းမှုတွေအားလုံးကို ပယ်ဖျက်သွားမည်။
ပွဲ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာပြီး MSI ၏ သုံးသပ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းပါ။ MSI မှ သင့်အား သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု သတ်မှတ်ပါက ထုတ်ယူရမည့် ပစ္စည်း - အကျုံးဝင်သော ပစ္စည်းတွဲတစ်ခုလျှင် Steam Wallet ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခု (1) ကို မှတ်ပုံတင်ထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကျုံးဝင်သော ပစ္စည်းအတွဲတစ်ခုချင်းစီ၏ အကျုံးဝင်သော လဲယူနိုင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် Steam Wallet တန်ဖိုးများစာရင်းကို အောက်ပါနေရာတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်-
MSI မှ စာရင်းပေးသွင်းမှုအားလုံးကို မည်သူကိုမျှ အသိမပေးဘဲ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခွင့်၊ လက်ခံခွင့်၊ ငြင်းပယ်ခွင့် ရှိပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးခွင့်ရှိသည်။ MSI မှ စာရင်းပေးသွင်းမှုအားလုံးကို မည်သူကိုမျှ အသိမပေးဘဲ မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခွင့်၊ လက်ခံခွင့်၊ ငြင်းပယ်ခွင့် ရှိပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးခွင့်ရှိသည်။ MSI မှ အကြောင်းကြားသော နောက်ဆက်တွဲ အချက်အလက်များကို ခုနစ် (၇) ရက်အတွင်း အကြောင်းမပြန်ပါက သင်၏ စာရင်းပေးသွင်းမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းထုတ်ယူမှုကို အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ထုတ်ယူသည့်ရက်အလိုက် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကွာခြားနိုင်သည့်အတွက် Steam Wallet တန်ဖိုးများသည် ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသော MSI ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို ဆိုင်သို့ပြန်အပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပြန်အမ်းခြင်း လုပ်ပါက MSI ထံသို့ လက်ရေးမူဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲအတွက် လျှောက်တင်ထားသည်ကို နောက်ထပ်အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အလိုအလျောက် ရုပ်သိမ်းသွားမည်။ ပြန်အပ်နှံလိုက်သော သို့မဟုတ် ငွေပြန်အမ်းလိုက်သော ပစ္စည်းများအတွက်ရရှိထားသော ဆုပစ္စည်း(များ)ကို ပြန်လည်အပ်နှံရန် စာရင်းသွင်းထားသူများအား MSI မှ တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။
ပါဝင်သူများသည် အနည်းဆုံး ၁၈နှစ် ပြည့်ပြီးရမည်။ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော နေရာများတွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
ဤပွဲသည် ဝယ်ယူ အသုံးပြုသူများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။ MSI ၊ MSI ၏ တွဲဘက် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ စီးပွားရေး မိတ်ဖက်၊ ဖြန့်ချိသူ၊ စနစ်အတွင်း ပါဝင်ဆက်စပ်သူများ၊ လက်ကားရောင်းချသူ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသူ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊ အင်တာနက်ကဖေးများ၊ အေဂျင်စီ ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများသည် ဤ အရောင်းမြှင့်တင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို MSIမှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအရာရှိတစ်ဦး၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ကြိုတင် အကြောင်းကြားထားမှုမရှိဘဲ ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
အကျုံးဝင်သည့် ဒေသများ- ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို၊ ချက် သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဩစတေးလျ၊ ဂျာမဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင်၊ နော်ဝေး၊ ပိုလန်၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ တူရကီ၊ ယူကရိန်း၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း၊ ယူအေအီး၊ ကူဝိတ်၊ အိုမန်၊ ကာတာ၊ ဘာရိန်း၊ ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား၊ အီရတ်၊ ယီမန်၊ အီဂျစ်၊ တောင်အာဖရိက၊ အစ္စရေး၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေး မူဝါဒ. ပွဲအတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန်နှင့် ပစ္စည်း မှတ်ပုံတင်မှုစဉ်အတွင်း မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များဖြစ်သည့် သင့် အီးမေးလ်၊ အမည်၊ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု အမှတ်စဉ်၊ ထုတ်ယူမည့် ကုတ်နံပါတ်၊ ဝယ်ယူမှု အချက်အလက်များနှင့် ရရှိနိုင်ပါက အခြား သင့်သဘောဆန္ဒအရ ဖြည့်စွက်မည့် အချက်အလက်များ အပြင် အခြားသော သင့်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့က တောင်းခံနိုင်သည်။ သင့်ထံမှ ကွတ်ကီးများ သို့မဟုတ် ဝက်ဆိုက်တွင်မြှုပ်ထားသော စာရင်းဇယားများမှတစ်ဆင့်လည်း သင့်ထံမှ အချက်အလက်များကို သွယ်ဝှိုက်သောနည်းဖြင့် ကောက်ခံနိုင်သည်။ ဤသို့ကောက်ခံထားသော အချက်အလက်များကို အောက်ပါတို့အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။- ဤပွဲ ဖြစ်မြောက်ရန်၊ သင်သည် ဤပွဲတွင် အကျုံးဝင်မဝင် အတည်ပြုရန်၊ လိုအပ်ပါက သင့်အား ဆက်သွယ်ရန်၊ ဆုများကို သင့်ထံသို့ သေချာ ပို့နိုင်ရန်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသော ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုတို့ကြားအဆက်အသွယ်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်၊( ဥပမာ- အာမခံများ၊ eDM အကြောင်းကြားစာများ၊ စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေစဉ်) နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖန်တီးနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီတွင်း ဈေးကွက်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်။ သင့်၏အချက်အလက်များကို အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မဝေမျှပါ။ ခြွင်းချက်မှာ ၁) ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝက်ဆိုက် တည်ဆောက်ပေးသူများ စသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဤ ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရန် သို့မဟုတ် ၂) တည်ဆဲဥပဒေများ ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်သည်ဟုသံသယရှိခြင်းကြောင့် တရားရုံးများ သို့မဟုတ် ရဲများစသည့် တရားဥပဒေအရ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ရှိသူများထံ အစီရင်ခံရန် သို့မဟုတ် အကြောင်းပြန်ရန်။
eDM ပုံမှန်ရယူမှု. MSI ၏ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ နှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များ ရယူနိုင်ရန် MSI ၏ eDM အီးမေး ပို့စနစ်အတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန် ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်သည်။ စာရင်းမပေးသွင်းလိုပါက စာရင်းပေးသွင်းမည် သို့မဟုတ် အလားတူရေးသားထားသော လေးထောင့်ကွက်ကို အမှန်မခြစ်ပါနှင့်။
ပါဝင်သူလိုင်စင်. ဤပွဲအတွက် အကျုံးဝင်သော ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ သုံးသပ်ချက်များ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အကြံပြုချက်များ၊ တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် လက်ရေးမူများအားလုံးကို မဖြစ်မနေနှင့် ရရှိနိုင်ပါက အခြားအရာများ("တင်သွင်းလိုက်သော အချက်အလက်ပစ္စည်းများ"ဟု စုပေါင်း၍ ခေါ်မည်။) ကို ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် MSI နှင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွဲများအားလုံးကို အမြဲတမ်း၊ ပကတိအတိုင်း၊ မူပိုင်ခွင့်မပါသော၊ အလုံးစုံငွေပေးချေပြီးသော၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုင်စင်ခွဲ ထပ်လုပ်နိုင်သော လိုင်စင်ပေးအပ်ရာ ရောက်သည်။ တင်သွင်းထားသော အချက်အလက်ပစ္စည်းများကို ဤလိုင်စင်ဖြင့် MSI မှ သတ်မှတ်ထားသော MSI ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒနှင့်ညီသည့် ဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီစွာ အသုံးပြု၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်၊ ကူးယူ၊ ဖြန့်ချိ၊ အခြေခံ၍ အသစ်များထုတ်လုပ်၊ အများသို့ချပြ တင်ဆက်၊ အသုံးချခွင့်ရှိသည်။
ပါဝင်သူ၏ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် အာမခံများ. သင် ဤတွင် ကိုယ်စားပြု၍ အာမခံသည်မှာ-
သင် ပေးလိုက်သော အချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်ကြောင်း၊
သင်သည် ဤပွဲတွင်ပါဝင်ရန် အာဏာ၊ အရည်အချင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပါဝင်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိကြောင်းနှင့် လိုအပ်သော လိုင်စင် ခွင့်ပြုမိန့်၊ ကိုယ်စားပြုမှု နှင့် အာမခံမှုများကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြောင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော လိုင်စင်များကို MSI နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများသို့ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်များ၊ ဆန္ဒပါဝင်မှုများ၊ ခွင့်ပြုမိန့်များ၊ လိုင်စင်များနှင့် သဘောတူ စာချုပ်များ အားလုံးလက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားကြောင်း
ဤပွဲသို့ စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအားလုံးကို လိုက်နာကြောင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်သူလျော်ကြေး. သင်သည် MSI နှင့် ၎င်း၏ တွဲဘက်လုပ်ငန်းများ၊ ဆက်ခံသူများ၊ တာဝန်ခံများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်သည့် မည်သည့် ကိုယ်စားပြုမှု၊ အာမခံ၊ ကတိကိုမဆို ဖောက်ဖျက်၍ဖြစ်စေ၊ ဖောက်ဖျက်သည်ဟု ယူဆ၍ဖြစ်စေ ပြင်ပဖွဲ့အစည်းများမှ တောင်းဆိုချက်များ သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမှုများ သို့မဟုတ် တရားစီရင်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားသော အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့်ထိုလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ကျသင့်သော တာဝန်များ၊ အပျက်အစီးများ၊ စီရင်ခံရမှုများ၊ ကျသင့်ငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အခကြေးငွေများအားလုံး (ကျသင့်သော ရှေ့နေခမှ အထိုက်အလျောက်ပမာဏ အပါအဝင်)ထံမှ ကာကွယ်၊ လျော်ပေး၊ အပြစ်ကင်းကြောင်း တာဝန်ယူပေးရမည်ဖြစ်သည်
ပါဝင်သူမှ သိရှိရမည့်အချက်များနှင့် ခွင့်ပြုချက်များ. ဤတွင် အောက်ပါတို့ကို သိရှိပြီး သဘောတူညီပါသည်။
MSI တစ်ဦးတည်းတွင်သာ အောက်ပါအချက်ကို အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါသည်။
ပါဝင်သူတစ်ဦးသည် ပွဲတွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ကောင်းမွန်သော ဆန္ဒဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပြီးခြင်းရှိမရှိကို နောက်ဆုံးနှင့် အလုံးစုံခြုံငုံသော ကောက်ချက်အနေဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါသည်။ စံနမူနာပြရန်နှင့် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် MSI မှ ပါဝင်သူများကို အောက်ပါအချက်များကြောင့် ထုတ်ပယ်ခွင့်ရှိသည်။- က)ပွဲသို့ပါဝင်ခွင့် လျောက်ထားရာတွင် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အား မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မပြည့်စုံခြင်း၊ ခ)အကျုံးဝင်သည့် ထုတ်ကုန်စဉ်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များစသည့် အကျုံးဝင်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ ဂ) တင်သွင်းလိုက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ အတုပြုလုပ်ထားခြင်း၊ လိမ်လည်ထားခြင်း၊ အလွတ်ဖြစ်နေခြင်း၊ ဃ) အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသော ကုဒ်များ၊ ကွန်ပြူတာအမိန့်စာများ၊ pluginများ၊ သို့မဟုတ်၊ အခြားနည်းလမ်းများကို သုံး၍ ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် လျောက်ထားခြင်း၊ င) ပါဝင်သူသည် ဤပွဲတွင်ပါဝင်ရန် ဥပဒေအရ အရည်အချင်း မပြည့်မီခြင်း၊ စ) ဤပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ဒုစရိုက်မှုများ၊ တရားမဝင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ထားခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲ ခံရခြင်း။
ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ဆုများကို တန်ဖိုးတူညီသော အခြားပစ္စည်းများဖြင့် လဲလှယ်ပေးအပ်ခွင့်ရှိသည်။
ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ဤမှ မည်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အခြေအနေကိုမဆို ပြင်ဆင်ခွင့် (သို့) ဖြုတ်ခွင့် (သို့) ထပ်ထည့်ခွင့်ရှိသည်။
ဆုနှင့် ဆုကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ မကျေနပ်မှုနှင့် ပျက်စီးမှုများအားလုံးအတွက် MSI မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အနိုင်ရရှိသူများမှ MSI ထံ မည်သည့် တောင်းဆိုချက်မျှ တင်သွင်းခွင့်မရှိပါ။
စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ၊ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် အင်တာနက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများ၊ ချို့ယွင်းမှုများ၊ ပျက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အနိုင်ရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားမှု နောက်ကျခြင်း၊ နေရာမှားခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ မရောက်ခြင်းတို့အတွက် MSI မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ဤကဲ့သို့ ကိစ္စဖြစ်လာပါက အနိုင်ရရှိသူမှ ရရှိမည့်ဆုနှင့် ဆုအတွက် အစားပေးအပ်ခြင်းအားလုံး၏ ရပိုင်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
MSI အာမခံချက်ထုတ်ပယ်ခြင်း. MSI က ပေးအပ်မည့် ဆု(များ)တွင် ရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ ပုံစံမကူးယူနိုင်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသည့် အာမခံများအပါအဝင် တရားဝင်ဖော်ပြထားသော သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် ဖော်ပြထားသော အာမခံအမျိုးအစား တစ်ခုတစ်လေမျှ မပါဝင်ပါ။
တာဝန်ဝတ္တရား ကန့်သတ်ချက်။ တည်ဆဲဥပဒေများ၏ ခွင့်အပြုနိုင်ဆုံး အတိုင်းအတာအရ သင့်၏မည်သည့်တောင်းဆိုချက်ကိုမဆို (စာချုပ်၊ အာမခံ၊ သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုအား လျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ်စေ၊ လိုက်နာမှုမရှိခြင်းဖြစ်စေ၊ ချို့ဖောက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းအရာများ၏ ဥပဒေသများအပေါ် အခြေခံသော/အခြေမခံ တာဝန်ယူမှု အယူအဆနှင့် စပ်လျဉ်း၍) မည်သည့် အထူး အကျိုးဆက်အားဖြင့် မှီခိုမှု၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပဲဖြစ်စေ၊ မတော်တဆဖြစ်စေ၊ အပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ဥပမာအနေနဲ့ ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်မည်ကို သိလျက်ဖြစ်စေ၊ မသိလျက်ဖြစ်စေ ဖြစ်သော ပျက်စီးမှုများနှင့် ဆုံးရှုံးသွားသော အမြတ်အစွန်းများ၊ ဝင်ငွေများ၊ ဂုဏ်သိက္ခာများ၊ အစားထိုးကုန်ကျငွေများအပါအဝင် အခြားကိစ္စများအတွက် MSI မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အထွေထွေ။ ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် ဥပဒေ စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုများရှိနိုင်သော်လည်း ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများအရဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေများအောက်တွင်ရှိသည်။ ဤပွဲမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အငြင်းပွားမှုအားလုံးကို ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ တိုင်ပေ ရှိ တိုင်ပေ ခရိုင်တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်သည်ကိုသာ အတည်ယူမည်ဖြစ်သည်။ အာဏာရှိသော တရားရုံးမှ အကျုံးမဝင်တော့ဟု သတ်မှတ်လိုက်သော အပိုင်းများကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို အပြည့်အဝဆက်လက် ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည်။ ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုကို ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များတွင် MSI မှ ထုတ်ဖော်ရန်ကျန်ရှိပါက ထိုရပိုင်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည်ဟု မယူဆရပါ။ MSI မှ ထိန်းချုပ်ခွင့်ထက်ကျော်လွန်သော သတ်မှတ်ချက်များကြောင့် လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်မှုအတွက် MSI မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို သင့်ထံမှ အခြားဘေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ တာဝန်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရပါ။ ခွင့်ပြုမိန့်မရသော တာဝန်များမှာအကျူံးမဝင်ပါ။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းများအကြားရှိ သဘောတူညီမှု တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီး ရှေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သဘောတူညီချက်များ၊ ဆက်သွယ်မှုများ၊ ကိုယ်စားပြုမှုများ၊ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆွေးနွေးမှုများ အားလုံးနေရာတွင် အစားထိုးဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို သိရှိပြီး သဘောတူပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် MSI ဆု အစီအစဉ် တွင် ပါဝင်ပြီး ဤအစီအစဉ်နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိလိုပါသည်။ ဤတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုသည် MSI ဆု အစီအစဉ်၏ သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းများ နှင့် MSI ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေး မူဝါဒများကို ဖတ်ရှုပြီး သဘောတူကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို MSI မှ MSI ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေး မူဝါဒအရ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးအတွက် ကောက်ခံ၊ အသုံးပြု၊ စီမံနိုင်ကြောင်း သဘောတူပါသည် https://www.msi.com/page/privacy-policy ။